I-premiere ye-American American serial series "Pines" (noma "Weyward Pines"), edalwe ku-trilogy efanayo kaBlake Crouch, yabanjwa ngoMeyi 14, 2015 ku-Fox yesiteshi. Lokhu kuyintandokazi yobugebengu obuyinto engavamile. Naphezu kokuthi ukusebenza kulo msebenzi omkhulu kwaqala eminyakeni emithathu edlule, ngo-2013, ngesizathu esingaziwa emphakathini jikelele, uNdunankulu uphinde wahlehliswa iminyaka emibili yonke.
Uchungechunge oluthi "Pines", ukubuyekezwa okwaqala ukubonakala ngemuva kokukhululwa kochungechunge lokuqala, kwakungenye yezinhlelo ezilindeleke kakhulu zonyaka odlule. Futhi akubanga imbangela yokumangala, ngoba inqubo yokudubula ibandakanya inani lokurekhoda labadlali abadumile.
Umlingisi oyinhloko wochungechunge yi-Agent Service Secret Ethan Burke. Ngomunye omuhle (noma ngokuphambene nalokho, okungafani nokuphelela - kodwa uzokwaziwa kamuva) ngosuku owafika ngalo edolobhaneni elincane lase-Weyward Pines, elise-Idaho. Inhloso yokuvakashela kwakhe endaweni engajwayelekile ukuthola abalingani bakhe ababili, ama-federal agents aphika khona emavikini amahlanu adlule. Ngomunye wabo, wayexhumeke ngaphezu kobudlelwane bomshado, ngisho nomshado kaBurke oqinile wawusengozini.
Ekungeneni komuzi i-agent isengozini yemoto esesabekayo. Kuye, weza kuphela embhedeni wesibhedlela. Manje akanakho amadokhumenti, akukho okhiye, akukho foni, ayikho isikhwama. Akakwazi ukuxhumana nabaholi ukuveza ukuthi kwenzekani kuye, noma umkakhe. Futhi amafoni azungeze asebenze noma. UBurke unomsebenzi owaziwa kakhulu ophethe irekhodi elihle kakhulu, kodwa konke okwenzekayo ngisho nakuye kubangela ukwesaba okungaqondakali okungakholeki.
Ngemva kokutholwa ngemuva kwengozi, uqala uphenyo lwakhe ngalokho okwenzekayo. Kodwa, njengoba i-Eaton idlulela ekudleni, unemibuzo eminingi kunezimpendulo. Akakwazi ukuqonda ukuthi kungani izakhamuzi zaleli dolobha zingathandi ukukhuluma ngedlule, azifuni ukuchaza noma yini. Into ebaluleke kakhulu emkhathazayo okwamanje ukuthi akunakwenzeka ukuphuma ku-Wayward Pines. Kubonakala sengathi idolobha njengedolobha lihle, lihle. Futhi nokho kukhona okungahambi kahle lapha, kodwa lokho - uBurke akaqondi. Yonke imigwaqo ongayishiya ngayo, iphinde iholele ekuboneni kuqala, kodwa empeleni idolobha elikhulu kakhulu.
Injabulo ngaphambi kokuqala
Kusukela ekuqaleni, uchungechunge oluthi "Pines", ukubuyekezwa kwalo okuhluke ngokuphelele - kusuka ekumemezelweni kuya ku-pejorative, okubizwa ngokuthi "i-Twin Pix" entsha. Ngakho-ke, kwakukhona izingxabano ezinkulu, izingxoxo, izingxoxo, ngisho nokubheja ezenziwa kulokho ekugcineni kuzoba khona.
Futhi ngempela: i-agent ekhethekile uBurke emva kwenhlekelele edolobheni, lapho konke kungabaza khona. Izakhamuzi zasendaweni zihamba emigwaqweni ngobuso obomotheka ngobuso, azithinti izingqikithi zesikhathi esedlule futhi zibuke ngokucophelela amafoni abo: uma othile ebabiza, kufanele uphendule njalo. Kuyini lokhu - devily? Yebo, nakanjani, kunjalo.
Ukuziphendukela kwemvelo ngokuphambene nalokho: kusuka ku-butterfly kuya ku-caterpillar
Umkhiqizi walolu chungechunge nomqondisi wesiqephu sokushayela kwakuwumqondisi odumile, uHindu Manoj Nelliattu Shyamalan. Wabhala iskripthi se "Stuart Little", eqoshwe "I-Sixth Sense" noBruce Willis kanye ne "Signs" noMel Gibson. Ifilimu yakhe yokugcina ephumelelayo yayingu "Ihlathi Elimangalisayo", futhi kuye kuye ukuthi lezi zilwane zifana kakhulu.
Isimo "se-Twinpix" sahlakazeka kakade esiqephu sesibili. Kwabe sekucacile ukuthi idolobha elingavamile laseWayward Pines Kuyinto nje uhlobo lweskrini ngemuva okufihla imfihlakalo ethile. Futhi ummeli u-Eaton Burke kufanele aqonde le mfihlakalo futhi ayixazulule.
Izakhamuzi zendawo zitholakala ngaphansi kwekhamera, isinyathelo ngasinye siphezulu. Labo abazama ukuphunyuka emzini, phambi kwabo bonke abantu, banquma imigexo yabo, futhi bahambisane nezinjabulo zenjabulo. Futhi lokhu kakade kukhunjulwa ngomsebenzi kaStephen King.
Uchungechunge lwezine lokuqala lungabangela umbukeli kakhulu, ngubani ozohlala ngombono ongaziwa ebusweni bakhe futhi acabange ngalokho okwenzekayo lapha.
Kuthatha isikhathi esincane kusukela ekuqaleni kombukiso, futhi uchungechunge oluthi "Pines" (Isikhathi 1, siboniswa ngokucacile) sikwenza kucace ukuthi iNkosi ayikho lutho kunoma yini. Phakathi kwesithombe, yonke into evezwayo yembulwa, futhi indaba eyimfihlakalo (futhi ejabulisa kakhulu izilaleli eziningi) iguqulwa ibe yinto engafanele engacabangi futhi engajwayelekile.
UNelliatta hhayi okokuqala wenza izifundo ezinjalo. Phela, ifilimu yakhe mayelana nehlathi elingavamile yaqala ngokuqondile njengendaba engacacile ngomzana omdala ohaqwe amahlathi, lapho kukhona khona into ethile, futhi iphelile ngemidlalo yomphakathi. Kodwa umehluko kulezi zindaba ezimbili ukuthi uchungechunge oluthi "Pines", abadlali abashaya yonke into ehlongozwa ngumqondisi, ngaphandle kobuciko, akanalo inani, futhi ukukhathazeka kwembula, ngokusobala, kusenesikhathi.
Isakhiwo se-Lousy esakhiwe
Futhi yingakho idolobhana elibonakala sengathi lingenakulinganiswa leWayward Pines lizungezwe ucingo oluphakeme kangaka, futhi izakhamuzi ngokwazo zibonakala zivela ezikhathini ezahlukene? Kuphi futhi ngubani odinga amakhamera alandelela izimpilo zabantu, nokubulawa kwabantu? Ungacabangela inguqulo evamile kakhulu yokuthuthukiswa kwezehlakalo futhi uqonde ngqo.
Ngokwemvelo, inqubo yokuguqula isibungu ibe yi-pupa kuqala futhi ibe yindwanguvu enhle. Kodwa indlela uchungechunge oluthi "Pines" lushintshwe ngayo, incazelo yendawo esetshenziswe ngayo kancane kancane kule ngqungquthela, isikhumbuza umsebenzi ongenakulinganiswa ngezikhali. Futhi zikhona izibonelo eziningi eziqinisekisa lesi sitatimende. Kungani le mibuzo kanye nezinkinga, eziziqaphele ngokuyinhloko engxenyeni yokuqala yesithombe, okwesibili sezivele zingaba mnandi? Kungani izenzo zikaDkt. Jenkins zinselele ukuthi ubani onecala lokuguqula idolobha libe yindawo enkulu lapho ... ukusinda kwabantu bonke kusongelwa?
Ngendlela, asikwazi ukwehluleka ukusho ukuthi isithombe siqoshiwe kumanoveli amathathu ngo-Crouch, ngakho icebo lancindezelwe ngangokunokwenzeka ukuze lilingane neziqephu eziyishumi.
Ngakho kuvela ukuthi "i-Pines" - uchungechunge, isakhiwo Okuqukethe izinhlobo eziningana - engxenyeni yokuqala yindwangu, ikhethini lokuhlobisa ngemuva lapho indaba yokuphila kwezinhlobo ezifihliwe ngokuthembeka. Sesha lapha ngencazelo noma logic akudingekile, ngoba ayikho into yokuchaza.
Lezi zimfihlakalo zifihliwe uchungechunge oluthi "Pines". Amazwana kuwo avela kubabukeli abaningi anjengokulandelayo. Mayelana nomdlalo we-actor, akukho okungaqondile okungashiwo. I-cast is ngaphezu kwehloniphekile: Matt Dillon, uCarla Gugino, uMelissa Leo, uToby Jones, uJuliette Lewis, uTerrence Howard, Diamond Reed ... Into eyodwa yimbi: akukho ndawo yokuveza ithalenta labo ngalesi sikali.
Kodwa umbuzo obaluleke kunawo wonke, owawungekho impendulo enengqondo, uphelela kulokhu okulandelayo: "Kungani idolobha le-Wayward Pines lakhiwe? Kungani ikusasa eliqhakazile lingeke lidalwe ngenye indlela, indlela enobuntu ngaphezulu?" Kodwa cabanga ngalokhu akudingekile: abalobi nabaqondisi babezinakekele konke okuthakazelisayo kakhulu, banakekele umdlalo ophithiwe kakhulu wokuphinga nokuthanda kwentsha.
Umehluko phakathi kwefilimu egcwele ubude nochungechunge
Usuku lokukhululwa kochungechunge oluthi "Pines" - ngoMeyi 14 wonyaka odlule - lwawela nje ekuqaleni kwenkathi yamaholidi, ngakho-ke wonke umuntu owayebheke phambili ekukhululweni kwakhe esikrinini, angase ajabulele uchungechunge ngalunye emoyeni ozolile.
Ku Knight Shyamalan, lokhu kwakuyiprojekthi yokuqala ayesebenza njengomkhiqizi. Futhi kunzima kakhulu kuye kwakuyijubane okwakufanele asebenze kulo lonke iqembu. Ibhayisikobho egcwele ubude idutshulwa iminyaka emibili noma emithathu, futhi lolu chungechunge lube lukulungele ezinyangeni eziyisithupha nje kuphela. Uma i-cinema evamile uhlobo lomncintiswano, ke uchungechunge luyindlela ehlukile ehlukene yezemidlalo, kubonakala sengathi i-sprint. Futhi lapha umlingisi oyinhloko ngeziqephu ezimbalwa kuphela angeke kubaluleke njengoba kubonakala ekuqaleni. Futhi eyesibili, ngokuphambene nalokho, inamathuba onke okuba ayigugu kakhulu.
Ba! Ubuso obujwayelekile ...
Ngakho, uchungechunge lwe "Pines". Abadlali abakha abadlali: Matt Dillon wadlala u-Ethan Burke, uCarla Gugino - uKeith Hewson, uToby Jones - uDavid Pilcher / uDkt Jenkins, uSennin Sossamon - uTeresa Burke, uCharlie Tahan - uBen Burke, uTerence Howard - uSheriff Arnold Pope, Hope Denis - Megan Fisher ...
Ababhali bezindaba bavame ukubuza umkhiqizi (Knight Shyamalan) ngokuthi kungani kwakunguMatthew Dillon owakhethwa indima eyinhloko. Uphendule ukuthi wayehlala ethanda ukusebenzisana nabadlali abanobudlova, ababengadutshulwa ngaphambili kumafilimu akhe. Phela, banomthwalo othile wemisebenzi yezinsizwa ezinzima, futhi bayayisebenzisa ngobuchule. UDillon, onomthunzi othize wokuzibusa, kusukela eqenjini elifanayo.
Yingakho uchungechunge lwe "Pines", ukubuyekezwa Mayelana nokuthi yiziphi izinhlobonhlobo ezabhalwa - ezivela kumabhayisikobho kuya kubadlali abathintekayo, baqoqa umxhwele omkhulu kangaka wabalingisi ngaphansi komthunzi wakhe. Yebo, bekungeke kube ngenye indlela, ngoba umkhiqizi wayefuna ukwakha ubuciko obuhle, okuyinto ngezindlela ezithile aphumelele.
Ukubumbisana okuhlangene kwezimbili ezimbili
Ochwepheshe bathi u-Manoja Nelliattu Shyamalan ungumnikazi weziphetho ezingalindelekile. Futhi lapha kufika umbuzo ozwakalayo: "Ungenzani noma yini engacabangeki uma uchungechunge ludutshulwa encwadini inoveli nguBlake Crouch?"
Kwakukhona ukuthi kulokhu isinyathelo esifanayo sasingenzeka ngempela. Okokuqala, amakhadi awazange adalulwe ekugcineni, njengokwesiko, kodwa mayelana neziqephu zesihlanu noma zesithupha. Umkhiqizi wayeqiniseka ukuthi kwakuthandeka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ababukeli abangu-98% abazange bafunde noma yiziphi izincwadi zeCrouch. Labo abajwayele umsebenzi wakhe, kuyothakazelisa ukubona ukuchazwa kweveli.
Lapho uCrouch ebhala incwadi yokuqala kuphela (futhi uchungechunge luhlanganisa abaningi abathathu), abadlali befilimu sebevele baqala ukudubula "Pines" (uchungechunge lwe-TV). Isiqephu sagcina sakhiwe ngenqubo yokubhala umbhalo nokuqhubeka nokuqopha - lapho uBlake ethola isikhathi esithakazelisayo esakhiweni sefilimu, wabathatha incwadi yakhe yesibili noma yesithathu. Futhi uShyamalana kancane kancane "wahudula" imibono evela kumlobi ukuze aqoshwe. Kwabe sekuthi umlobi nomkhiqizi ngokufanayo bahlakulele umugqa ofanayo.
"Angikulungele ukusebenza ngendaba eyodwa kuya engaphelelweni"
Kulungile ukuphela kochungechunge lokugcina lwemidwebo "Pines". Ukuqhubeka kochungechunge kuhlelwe noma cha? Lo mbuzo uthanda abaningi abathanda le nguqulo yeskrini. Ngemva kokukhishwa kweziqephu zokuqala, uShyamalan wangitshela ukuthi wayengakakulungeli ukusebenza kwelinye iphrojekthi iminyaka eminingana elandelanayo. Futhi ukuthi uma enikezwa umqondo ngokuqhubeka kwesithombe, uzophendula ngezwi lokumamukela ukuthi kufanele kuthathe isikhathi esithile. Uma lo mqondo omusha uphenduka ube mkhulu, uzovuma ukuqhubeka. Nakuba umkhiqizi ngokushesha evuma ukuthi akaphumelelanga ngempela ekulandeleni.
Noma kunjalo, uma ubuka idatha yemidiya yonyaka odlule, ungabona ukuthi ekuqaleni kukaDisemba umzila weFox wandisa uchungechunge lwesizini yesibili. Ukuqala kwakhe kwenzeka ngoMeyi 25, 2016. Khumbula ukuthi uchungechunge oluthi "Pines" (Isizini 1) luphuma cishe usuku ngosuku ngonyaka odlule.
Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani ngokulandelayo, ungaqiniseka ngokugcwele ukuthi inkathi entsha (uma iphuma ezikrini) iyoba yizinhlobo eziningi. Futhi ekugcineni kuyoba ehluke ngokuphelele kunasekuqaleni. I-Shyamalan ihlale ithanda ukuhlanganisa i-unconnected, inentshisekelo yokuxuba izinhlobo, nokungahambisani nemigodi yesinye noma enye.
Lokhu kungase kube uchungechunge lwe "Pines". Zingaki zonyaka Izozobe zifakiwe, azikaziwa. Kodwa empeleni ukulindela kubangela isithakazelo futhi kukhuthaza ukuqoqwa kwemizwelo. Futhi kuhle!
MIA sibhedlela (Tuapse), "i-Pine". Centre for bokubuyisana Medicine and Rehabilitation